Employment isemqoka kakhulu Macroeconomics. Kuyaqondakala njengoba isibalo sabasebenzi yobudala abadala (abaneminyaka engu-16), ukuthola umsebenzi. Ngeshwa, akuyona yonke we omdala zokusebenza yobudala labantu has umsebenzi lapho, futhi izakhamuzi abangasebenzi. Ukuntuleka kwemisebenzi umnotfo emakethe libhekene inani izakhamuzi omdala enamandla abangenayo imisebenzi, kodwa ngenkuthalo ngifuna ke. Inani labantu abangasebenzi futhi baqashwe - kungcono emisebentini.
Calculus abangasebenzi kusetshenziswa nemingcele ezahlukene, kodwa ezivamile, kuhlanganise ne-International Labor Organization, lizinga lalabamnyama labangasebenti kubhekwa.
Ukuntuleka kwemisebenzi umnotfo emakethe iyisici izimo zenhlalo yomphakathi nezomnotho, lapho amaphesenti athile kwetisebenti alisetshenziswa ukukhiqizwa kwezimpahla namasevisi. Ngesikhathi esifanayo ngaphansi kwetisebenti kusho inani abazisebenzayo nalabo abangasebenzi.
Hlukanisa lezi zinhlobo ezilandelayo abangasebenzi:
Kungasebenti lihlotshaniswa isikhathi kudingeka ukuthola umsebenzi omusha, libhekisela abangasebenzi kokukhuhlana. ubude bayo kungaba inkathi kusukela ngenyanga 1 kuya 3.
abangasebenzi kokukhuhlana kwenzeka ngenxa ukuthuthukiswa othakazelisayo emakethe yezabasebenzi. Ingxenye abasebenzi ngokuzithandela yanquma ukushintsha indawo yomsebenzi, ukuthola, isibonelo, ephakeme ukukhokha noma umsebenzi mnandi. Enye ingxenye abasebenzi ukukhuthalele ngifuna umsebenzi ngenxa yokuxoshwa endaweni ekhona umsebenzi. Ingxenye yesithathu abasebenzi nje ngokufaka semsebenzini emakethe yezabasebenzi , noma okokuqala ukuza kuye ngenxa ukunyakaza kwemvelo ngasebenzi labantu isigaba, kusukela iphuzu kwezomnotho umbono, isigaba okuphambene.
Kungasebenti lihlotshaniswa tingucuko ekukhiqizeni nokushintsha isakhiwo ukufunwa abasebenzi - kwemisebenzi. Kwenzeka nangabe isisebenzi, ngubani waxoshwa kusukela umkhakha esifanayo, ungakwazi ukuthola umsebenzi kwenye umkhakha.
kwemisebenzi kwenzeka lapho funa indawo noma imikhakha ngoba isakhiwo zabasebenzi. Ngokuhamba kwesikhathi, ubuchwepheshe kanye zabathengi isidingo isakhiwo ushintsho olukhulu zenzeka, okuyinto abangela izinguquko isakhiwo ukufuneka jikelele umsebenzi. Uma isidingo zabasebenzi abanomsebenzi othile noma endaweni ethize uwela ke umphumela ukungasebenzi. Abasebenzi ebugqilini ukukhiqizwa, abakwazi ngokushesha ukushintsha ziqu zabo nasezinkolelweni noma ukushintsha indawo yabo yokuhlala, ngakho baphoqeleka isikhathi abasebenzi.
Zezomnotho ngokuvamile musa ngokucacile ukuhlukanisa phakathi kwemisebenzi kanye kokukhuhlana, njengoba kule futhi kwelinye icala le abasebenzi abaxoshiwe ukukhuthalele ngifuna umsebenzi omusha.
Kumele kuqashelwe ukuthi lezi zinhlobo lokuntuleka kwemisebenzi umnotho khona unomphela, ngoba sehliselwe ngokugcwele zero, noma ukubhubhisa akunakwenzeka. Abantu intando ukubukeka entsha umsebenzi, kuhloswe for the zezimali inhlalakahle, futhi inkampani yena, uzofuna faka kakhulu afanelekayo abasebenzi, njengoba lokhu ulungisiswa zabo isifiso Ukuze yenze inzuzo eningi. Lokho njalo ziyaguquguquka nezidingo izinkomba emnothweni emakethe emakethe yezabasebenzi.
Kusukela khona yokwesweleka kwemisebenzi kanye kokukhuhlana akunakugwenywa, osomnotho, sum yabo washayelwa njengoba izinga engokwemvelo abangasebenzi
abangasebenzi Yemvelo esho Izinga lokungasebenzi ezinjalo, okuhambelana umsebenzi wokuziphilisa wesikhathi esigcwele (ehlanganisa izidingo zesakhiwo kanye kokukhuhlana ifomu abangasebenzi. izizathu zemvelo Izinga labangasebenzi ngenxa lezisekelo zemvelo, ezifana ukufuduka, inzuzo, izizathu yezibalo.
Uma umnotho usalelwe izinga engokwemvelo abangasebenzi, lesi simo sibizwa ngokuthi umsebenzi ngokugcwele.
Izizathu izinga engokwemvelo abangasebenzi - ibhalansi emakethe yezabasebenzi, lapho inani lezisebenzi efuna okufanayo, kulingana nesibalo singenamuntu imisebenzi. Ngakho-ke, umsebenzi wesikhathi esigcwele ehloselwe 100% ukungabi khona abangasebenzi, kodwa kuphela ezingeni elithile ubuncane abangasebenzi. Izinga Natural sabantu abangasebenzi ngezinga elithile kuyinto enhle.
Ukubekwa kanye nokusebenza ukukhangisa media ahlukahlukene
Engamancozuncozu intela amafa kanye accounting zabo
Indlela ukususa iringi